Yaa Mas'alooyinka Diinta horay u fahmay Suufiyada, Al itixaad iyo Al islaax? – Bandhiga
Home Al itixaad iyo Al islaax?
Yaa Mas'alooyinka Diinta horay u fahmay Suufiyada, Al itixaad iyo Al islaax?
in Al itixaad iyo Al islaax?
Sida aad marqaati ka tihiin Sideetameeyadii iyo Sagaashameeyadii wadaadada Al Itixaadka ama Al icitisaam ma aysan ogolayn Sawirada iyo Duubista muuqaalada oo waxay dhihi jireen waa Xaaraan ayagoo daliil keeni jiray!!
Balse xiligaas Wadaadada Suufiyada iyo Al islaaxa way ogolaayeen in Sawirada la galo ama qof iska duubo Muuqaalo Video. Hadaba Wadaadadii iyo dhalinyaradii waagaas ka tirsanaa Xarakada Al itixaad ama Al ictisaas (qaarkood Salafi noqdeen) oo aniga asxaab badan ku leeyahay hada sawirada iyo Muuqalada la duuba way galaan, bal waxaa la dhihi karaa ayagaa dadka uga horeeya.
Sidaas darteed, Mas’alada Sawirka iyo Muuqaal duubista dood iyo khaliif kama keenaan iminka Wadaadadii Al itixaadka Al ictisaamka ahaan jiray oo waxay ku raaceen wadaadada Al Islaax iyo Suufiyada oo mas’aladaan horay u fahmay.
Hadaba, Su’aasha meesha taalo waxay tahay yaa horay u fahmay Mas’alooyinka diinta Wadaadada Suufiyada, Al islaaxa iyo Al Itixaadka ama Al ictisaamka oo hada qaybo badan oo ayaga ah isku bedelay qaybaha ay u kala baxaan Salafiyiinta?
Ma Itaxaadka ayaa qaldanaa waagii Sawirada waa xaaraan dhihi jireen,ma waxay ku raaceen Mas’aladaan Suufiyada iyo Al islaaxa ayada oo diin ahaan banaanayn? !! Sidee idinla tahay ?
By: Xuseen Sahnuuni